Isithambisi sikaJOYSUN sinomphumela omuhle wokuthambisa, impahla enhle yemishini. Njengokugcoba kokhuni lweplastiki, lo mkhiqizo ungathuthukisa ukusebenza kokucubungula kwe-resin ye-matrix, futhi kuthuthukise ukuphela komhlaba komkhiqizo. Ukwehliswa kwe-PE WPC
1. I-Ca-Zn stabilizer Calcium-zinc stabilizer is synthesized by special compound technology, as main components. Ingathatha indawo yokuqiniswa okunobuthi okufana nomthofu, i-cadmium usawoti kanye ne-organotin, i-Practice ifakazele ukuthi kumikhiqizo ye-PVC resin, ukusebenza kokusebenza kuhle, ukuzinza okushisayo kufana nokuqiniswa kasawoti oholayo, njengoba iningi lezinto zokuvikela ukushisa ze-pvc inqubo enhle kakhulu yokusebenza. Ukuzinza okuhle okushisayo nekhono lesimo sezulu. Ukukhanya kwelanga okulwa nokuqina, ...